GNU Taler 0.8: အီလက်ထရောနစ်ငွေပေးချေမှုစနစ်၏ဗားရှင်းအသစ် | Linux မှ
GNU Taler 0.8- အီလက်ထရွန်းနစ်ငွေပေးချေမှုစနစ်၏ ဗားရှင်းအသစ်
Linux Post Install လုပ်ပါ | | applications များ, NOTICIAS
လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကအတိအကျဖြစ်သည် 28 သြဂုတ်လ 2021 ဖြန့်ချိခဲ့သည် GNU Taler ၏ဗားရှင်းအသစ် 0.8မရ။ တစ်ခုကဘာလဲ အခမဲ့နှင့်အခမဲ့အီလက်ထရောနစ်ငွေပေးချေမှုစနစ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ဖွံ့ဖြိုးနေသော၊ GNU စီမံကိန်း အတွက် GNU / Linux လည်ပတ်ရေးစနစ်.
၎င်းသည်ခွင့်ပြုငွေပေးချေမှုစနစ်ကိုကမ်းလှမ်းရန်လည်းကြိုးစားသည် အွန်လိုင်းအရောင်းအဝယ်ဖော်ရွေသော၊ သီးသန့်၊ မြန်ပြီးရိုးရှင်းသည်။
GNU Taler 0.7 ကိုထွက်ရှိထားပြီး၊ ဤအခမဲ့အီလက်ထရွန်နစ်ငွေပေးချေမှုစနစ်ကိုသိအောင်လုပ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ယခင်စူးစမ်းလေ့လာလိုသူများအတွက် GNU Taler နှင့်ပတ်သက်သောစာအုပ်စာတမ်းများဤတင်ပြချက်ကိုဖတ်ပြီးသည်နှင့်အောက်ပါ link များကိုသင်ကလစ်နိုင်သည်။ သို့မှသာ၎င်းတို့သည်ပိုမိုနက်ရှိုင်းလာနိုင်သည်ဟုဆိုသည် အီလက်ထရောနစ်ငွေပေးချေမှုစနစ်:
"GNU Taler သည် freeware အခြေပြုအီလက်ထရောနစ်ငွေပေးချေမှုနှင့် microtransaction software ဖြစ်သည်။ ဒီစီမံကိန်းကို Taler Systems SA မှ Florian Dold နှင့် Christian Grothoff တို့က ဦး ဆောင်သည်။ GNU Taler သည်ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာထည့်သွင်းမှုများနှင့်အညီလိုက်နာသောကြောင့်ဤအီလက်ထရောနစ်ငွေပေးချေမှုစနစ်ကို GNU Project မှပံ့ပိုးပေးပါသည်။" GNU Taler 0.7 ကိုထွက်ရှိထားပြီး၊ ဤအခမဲ့အီလက်ထရွန်နစ်ငွေပေးချေမှုစနစ်ကိုသိအောင်လုပ်ပါ။
Richard Stallman သည် Bitcoin ကိုမယုံကြည်သောကြောင့် GNU Taler အသုံးပြုရန်အကြံပြုသည်
1 GNU Taler 0.8: ဗားရှင်းကိုသြဂုတ်လ ၂၄ မှရနိုင်သည်
1.2 GNU Taler 0.8 ၌ဘာများထူးခြားသနည်း
GNU Taler 0.8: ဗားရှင်းကိုသြဂုတ်လ ၂၄ မှရနိုင်သည်
၎င်းသည် GNU Project မှထောက်ခံသောအခမဲ့ဆော့ဝဲပေါ်တွင်အခြေခံသောတိုးတက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
၎င်းသည်ရပ်ရွာများအား၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်ငွေပေးချေမှုအခြေခံအဆောက်အ ဦး များတည်ဆောက်ရန်ခွင့်ပြုသည်။
ယနေ့အချိန်အထိ၎င်းသည်ငွေကြေးအသစ်၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းများသာမကလက်ရှိ fiat ငွေကြေးများနှင့်အလုပ်မလုပ်ပါ။
"GNU Taler သည် privacy ကိုထိန်းသိမ်းသောငွေပေးချေမှုစနစ်ဖြစ်သည်။ ၀ ယ်သူတွေကအမည်မဖော်ဘဲနေနိုင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ရောင်းသူတွေကသူတို့ရဲ့ ၀ င်ငွေတွေကို GNU Taler နဲ့ငွေပေးချေမှုတွေကနေဖုံးကွယ်လို့မရဘူး။ ဒါကအခွန်ရှောင်မှုနဲ့ငွေကြေးခဝါချမှုကိုကာကွယ်ပေးပါတယ်။ GNU Taler ၏အဓိကအသုံးပြုမှုမှာငွေပေးချေမှုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်တန်ဖိုးသိုလှောင်ရာတစ်ခုအဖြစ်အာရုံမစိုက်ပါ။ ငွေပေးချေမှုများကိုအမြဲရှိပြီးသားငွေကြေးဖြင့်ထောက်ပံ့သည်။ Taler အတွက်ငွေပေးချေမှုပေးသူ (Exchange service) ၏အကူအညီဖြင့်ရှိပြီးသားငွေကိုလျှပ်စစ်ငွေအဖြစ်အီလက်ထရောနစ်ငွေကြေးသို့လဲလှယ်ပြီးနောက်ငွေပေးချေမှုကိုပြုလုပ်သည်။" GNU Taler: အင်္ဂါရပ်များ
GNU Taler 0.8 ၌ဘာများထူးခြားသနည်း
ဤဗားရှင်းအသစ်တွင်ပါဝင်သည် တစ် ဦး ချင်းပြဿနာပေါင်း ၄၀၀ ကျော်ကိုဖြေရှင်းနိုင်သည်မရ။ ၎င်းတို့တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အသစ်များနှင့်ပေါင်းထည့်ထားသောအပြောင်းအလဲများကိုဖော်ပြနိုင်သည်။
WebExtension ပိုက်ဆံအိတ်သည်ယခု GNU IceCat နှင့်အလုပ်လုပ်သည်။
အရောင်းအ ၀ ယ်နှင့်အရောင်းအ ၀ ယ်အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုစည်းကမ်းချက်များကိုပံ့ပိုးပါ။
F-Droid အတွက်အရောင်းအ ၀ ယ်နှင့်ငွေရှင်းကောင်တာ application application
ပြုပြင်ထားသောနှင့်ထည့်ထားသောအရာများအကြောင်းအသေးစိတ်ကြည့်ရန်အောက်ပါတို့ကိုလေ့လာနိုင်သည် link ကို.
"GNU Taler သည်အခမဲ့ Software ဖြစ်ရမည်။ ကုန်သည်များအတွက်အခမဲ့ဆော့ဝဲသည်ရောင်းသူအားသော့ခတ်ခြင်းကိုကာကွယ်ပေးသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာကုန်သည်များသည်၎င်းတို့၏ငွေပေးချေမှုကိုဆောင်ရွက်ရန်အခြား ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူကိုအလွယ်တကူရွေးချယ်နိုင်သည်။ နိုင်ငံများအတွက် Free Software ဆိုသည်မှာ GNU Taler သည်ကန့်သတ်ချက်များသို့မဟုတ်လိုအပ်ချက်များချမှတ်ခြင်းဖြင့်အချုပ်အခြာအာဏာကိုအလျှော့မပေးနိုင်ပါ။ နှင့်လဲလှယ်ရောင်းဝယ်သူများအတွက်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုသည် Kerckhoff မူအရကျေနပ်ရန်နှင့်လူထုယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရန်အရေးကြီးသည်။
ဖောက်သည်များသည်အခမဲ့ဆော့ဝဲများမှအကျိုးခံစားခွင့်ရှိသောကြောင့်မည်သူမဆိုအပိုပလက်ဖောင်းများကိုပံ့ပိုးရန်အစုစုဆော့ဝဲများကိုအခမဲ့ပြုပြင်ခွင့်ရှိသည်။ source code ကိုရရှိနိုင်သင့်ပြီး၎င်းအားခြေရာခံခြင်းနှင့် telemetry ကဲ့သို့သောရန်လိုသောအင်္ဂါရပ်များမရှိကြောင်းအတည်ပြုရန်လွယ်ကူစေသင့်သည်။" GNU Taler အခြေခံမူများ
တိုတိုပြောရရင် "GNU Taler" စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပြည့်အ ၀ နည်းပညာအသုံးပြုမှုကို အခြေခံ၍ ငွေပေးချေမှုကိုအီလက်ထရောနစ်နည်းလမ်းများသို့ blockchains များ၊ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသောကွန်ယက်များနှင့် cryptocurrenciesမရ။ ဗားရှင်း ၁.၀ တွင်တည်ငြိမ်လာသောအခါမျှော်လင့်သည် ပိုက်ဆံအိတ် တွင်တိုက်ရိုက်တပ်ဆင်နိုင်သည် GNU / Linux Distros၎င်းကိုအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေဖြင့်တီထွင်ထားသောကြောင့်ပြီးပြည့်စုံစွာဖြစ်နိုင်သည် GNU စီမံကိန်း အတွက် GNU Operating System.
ဤစာစောင်သည်တစ်ခုလုံးအတွက်အလွန်အသုံးဝင်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်ရရှိနိုင်သောလျှောက်လွှာများ၏ဂေဟစနစ်၏တိုးတက်မှု၊ ကြီးထွားမှုနှင့်ပျံ့နှံ့မှုတို့အတွက်များစွာအထောက်အကူပြုသည် «GNU/Linux»။ သင်၏အကြိုက်ဆုံးဝက်ဘ်ဆိုက်များ၊ လိုင်းများ၊ အုပ်စုများသို့မဟုတ်လူမှုကွန်ယက်များသို့မဟုတ်စာတိုပေးပို့ရေးစနစ်များတွင်အခြားသူများအား၎င်းကိုမျှဝေခြင်းကိုမရပ်တန့်ပါနှင့်။ နောက်ဆုံးကျွန်ုပ်တို့၏မူလစာမျက်နှာသို့သွားပါ «FromLinux» သတင်းများပိုမိုရှာဖွေရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏တရားဝင်ချန်နယ်ဖြစ်သည် DesdeLinux မှကြေးနန်း.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » GNU Taler 0.8- အီလက်ထရွန်းနစ်ငွေပေးချေမှုစနစ်၏ ဗားရှင်းအသစ်
Cryptogames: သိရန်၊ ကစားရန်နှင့်အနိုင်ယူရန် DeFi လောကမှအသုံးဝင်သောဂိမ်းများ
Gab: Mastodon-based Open Source Social Networking Software